SAWIR: Sawir Gilgilay dareenka kumanaan dad ah(Muxuu sameynaa Qofka sawiran) | Xaqiiqonews
SAWIR: Sawir Gilgilay dareenka kumanaan dad ah(Muxuu sameynaa Qofka sawiran)
Muuqaal uu qaaday sawir-qaade ka mid ahaa saxafiyiinta joogay xajkii sanadkan ayaa qabsaday baraha bulshada, kaasoo muujinaya haweeney ka mid ahayd dadkii xajinayay oo saygeeda hoos u noqotay xilli uu tukunayay.
Waxay ahayd maalintii 9aad ee Xajka MAALINTA CARAFA la taagnaa, marka uma maleyn sawirqaade Raa’id Allaxyaani in sawirkan uu qaaday uu noqon doono mid caan baxa oo dunida oo dhan ay hadal heyso.
Ninka sawirkan laga qaaday oo cabsi laga qabay ayaa isna ka mahad celiyay sawirka laga qaaday isagoo sheegay haddii aanu muujineynin raxmad iyo kalsooni ka dhaxeysa labada ruux is qaba inaysan xaaladdaas gaarteen.
Allaxyaani oo shahaado jaamacadeed ka heysto cilmiga bulshada ayaa sheegay in uu aad u jeclaa sawir qaadista tan iyo markii uu jiray 13 sano isagoo dhowr mar helay abaa; marin la xariira sawir qaadistiisa waxaa uuna sanadkan ka mid ahaa wariyaasha sawir qaadayaasha xajka